आगामी आवका लागि विनियोजित ६ अर्ब बजेट अपुग हुने अवस्था छ, यसैले खर्चको पारदर्शिता र मितव्ययितामा जोड दिनु आवश्यक छ ।
सरकारले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम एवं कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि अपारदर्शी ढंगले जथाभावी खर्च गरिरहेको आरोप लागिरहेका बेला हालसम्मको कुल खर्च सार्वजनिक गरेको छ । हालसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । जसमा कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण, जोखिम भत्ता र राहत वितरणमा करिब ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेसँगै अनेकौं प्रश्न उठेका छन् ।
कुल खर्च अस्वाभाविक देखिएसँगै खर्चको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ । सरकारले हालसम्म दिएको जानकारीअनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जसमध्ये करिब डेढ अर्ब राहत वितरणमा मात्र खर्च भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणअनुसार १२ लाख परिवारलाई राहत वितरण गरेको विवरण स्थानीय तहले पठाएका छन् । प्रभावितले राहत नपाएको अवस्था तथा संक्रमित संख्या न्यून हुँदै यति ठूलो बजेट खर्च भइसकेकाले भोलिका दिनमा हजारौं संक्रमित थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय बजेट नै यसैमा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । यता धेरै स्थानीय तथा प्रदेशले नै पनि संघीय सरकारको सहयोग नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । तर, सरकारले खर्च गरेको १० अर्बमध्ये धेरैजसो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको भनिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भरपर्दो अनुसन्धान गर्न सकिरहेको छैन र यसले भ्रष्टाचारलाई झनै प्रोत्साहन गरेको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहबाट राहत वितरणमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा कुहिएको चामल तथा दाल वितरण गरेको पाइएको छ भने कतै तौलभन्दा कम वितरण गरेकोमा विश्वसनीय छानबिन हुन सकेको छैन ।
सरकारप्रति भरोसा टुटेकै कारण कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहतका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा रकम पनि अपेक्षाकृत जम्मा हुन सकेन । हालसम्म यो कोषमा २ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख रुपैयाँमात्र जम्मा भएको छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान नगण्य छ अर्थात ९५ प्रतिशत योगदान सरकारी संस्थान तथा पब्लिक कम्पनीहरूको मात्रै देखिन्छ । यो सरकारप्रतिको अविश्वासको उपज हो । सरकारी खर्चमा यसरी पारदर्शिता नहुँदा भोलिका दिनमा यो कोषमा कसैले पनि जम्मा गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
त्यसो त कोरोनाभाइरस संक्रमितको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले नै बेहोर्दै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमितको अस्पताल बसाइ सात दिनदेखि ३७ दिनसम्म छ । तर, संक्रमितको औसत अस्पताल बसाइ २० दिन मात्रै छ । हाल एकजना कोरोना संक्रमितको दैनिक उपचार खर्च २२ सय रुपैयाँ रहेको बताइन्छ । सरकारी बजेटबाहेक निजी क्षेत्रले केही राहत र नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि धेरै खर्च यो शीर्षकमा गरिसकेका छन् । हालसम्म आइएनजीओले मात्र १ अर्ब ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरका कोरोनाभाइरस नियन्त्रण र राहतसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागेको बताइन्छ । यसरी यही अनुपातमा खर्च भइरहे भोलिका दिन आगामी आवका लागि विनियोजित ६ अर्ब बजेट अपुग हुने अवस्था छ । यसैले खर्चको पारदर्शिता र मितव्ययितामा जोड दिनु आवश्यक छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा १२ अर्ब खर्च
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा लगभग १२ अर्ब रुपैया खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । संघ, प्रदेश, स्थानिय तह र विभिन्न अस्पतालले गरेको साउनसम्मको खर्च ११ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासहित रक्षा, गृह, परराष्ट्र र सहरी विकास मन्त्रालयमार्पmत रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सो रकम खर्च भएको जनाइएको छ ।
कोरोना रोकथाम र उपचार : चर्को दबाबपछि खर्च विवरण सार्वजनिक
काठमाडौं । व्यापक जनआक्रोश र प्रदर्शनपछि सरकारले कोरोना रोकथाम र उपचारमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भएपछि सरकारले शनिबार खर्चको फाँटवारी विवरण सार्वजनिक गरेको हो । कोरोना नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च …
कोरोना रोकथाम र उपचारमा ८ अर्ब ३९ करोड खर्च
काठमाडौं । व्यापक जनआक्रोश र प्रदर्शनपछि सरकारले कोरोना रोकथाम र उपचारमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न काठमाडौं उपत्यका सहित बिभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भएपछि सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गरेको भनेको …
राजधानी दैनिक बैशाख २०७७
सरकारको हिसाब : कोरोनामा ८ अर्ब ३९ करोड खर्च
३१ जेठ, काठमाडौं । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न काठमाडौं उपत्यकासहित बिभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भएपछि सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सीसीएमसी निर्देशन समितिको निर्णयअनुसार खर्च …
एक जना कोरोना संक्रमितका लागि कति लाग्छ दैनिक खर्च?
काठमाडौं : नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुगिसकेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका तथा रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म झण्ड १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाएको छ। कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण, राहत वितरणमा हालसम्म ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च
सरकारले हालसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । कोरोना
नयाँ पत्रिका बैशाख २०७७
कोरोना रोकथाममा सरकारको खर्च करिब १० अर्ब, स्थानीय तहबाट भएको खर्च विवरण राख्नै बाँकी!
सरकारले हालसम्म कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले कति खर्च गर्‍यो?
कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म अरिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रण उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
नागरिक दैनिक बैशाख २०७७